Filtrer les éléments par date : mardi, 10 janvier 2017
mardi, 10 janvier 2017 19:51
Alaotra Mangoro : Tena maina tanteraka
Raha ny teto Ambatondrazaka tampon-tanàna dia ny andron’ny taombaovao 1 janoary no mba nisy orana saingy kely.
Ankehitriny dia tena maina tanteraka ny andro, ritra daholo ny barazy. Tsy voaketsa ny ankamaroan’ny tanimbary, ny vita ketsa indray lasa mahamay be ny rano.
Ahiana ny voka-bary amin'ity taona ity.
mardi, 10 janvier 2017 19:48
Fianarantsoa : Hahery vaika ny fatapahan-jiro
Hanomboka mahery vaika ny fatapahan-jiro eto amin'ny tananan'i Fianarantsoa sy ny manodidina hoy ny tale iraisam-paritry ny Jirama eto an-toerana.
Antony nomeny momba izany ny tsy fahampian'ny solika sy ny faharitan'ny ranon'i Namorona.
Mihatra androany 10 janoary ka hatramin'ny andro tsy voafetra izany fepetra izany hoy ihany ity tompon'andraikitra ity.
mardi, 10 janvier 2017 19:33
Ambohidahy: Tsy azo ijanonan'ny fiara ny trottoir
Tsy avelan'ny mpitandro ny filaminana hisy fiara mijanona intsony eny amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra na ny trottoir eny Ambohidahy izay eo ampitan'ny ministeran'ny fahasalamana.
Nilaza ny mpitandro ny filaminana fa na iza na iza fiara mijanona eo dia hiaran'ny sazy ho fametrahana ny tany tan-dalàna.
Mbola misy ihany anefa ireo mpiasa ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana mitsipaka izany, koa dia ho hita eo indray ny tohiny.
mardi, 10 janvier 2017 19:15
Andavamamba: Salon de l’orientation des jeunes bacheliers
Atao ao amin’ny Alliance Française Andavamamba ny 10 sy 11 janoary 2017 izao ny Salon de l’orientation des jeunes bacheliers.
Hita hatreto fa dia sahiran-tsaina ireo mpianatra manoloana ny fisafidianana ny sampa-pianarana izay ho ataon'izy ireo.
mardi, 10 janvier 2017 19:12
KOTROBARATRA : Io no hira farany izay nisarahana tamin’i Bruno Raisner
Tsy afaka teo am-bavan’ny olona na ny kely na ny lehibe, ary maro ireo mpanankanto izay nanotrona azy ka sady nihira ny Kotrobaratra teto Antananarivo.
Hiazo an’i Toamasina sy Sainte-Marie, raha niadrasana tao amin’ny tranompokonolona Analakely io tolak’andro io ny nofo mangatsikan'i Bruno Raisner.
Tonga nitsapa alahelo teny ny minisitry ny kolon-tsaina Jean Jacques Rabenirina sy ny ny minisitry ny rano Johanita Ndahimananjara izay anisan’ny mpiray fiaviana amin’ny tompokolahy.
Mbola tsy fantatra mazava ny handevenana azy satria dia miandry ny fanampahan-kevitry ny fianakaviana any an-toerana, araka izany dia any an-toerana no hanomezana ny mari-boninahitra azy.
mardi, 10 janvier 2017 13:53
Lions Club : Visite du Gouverneur du District 403B2 dans la SAVA
Le Gouverneur du District 403B2 du Lions Club Rakotozafy Fidy est en visite dans la région SAVA depuis hier. Il a débuté sa visite à Antalaha puis Sambava, Andapa et Vohémar.
mardi, 10 janvier 2017 13:45
Oniversite Mahajanga : Nahatsiaro ny raharaha 10 janoary 2014 ireo mpianatra
Feno efa-taona amin’ity taona ity ny fitakiana nataon’ireo mpianatra izay nahafatesana mpianatra iray dia i Tiamananjara Emilien Félix ny 10 janoary 2014 ary naharatrana 11 hafa.
Niafara tamin’ny fifandonan’ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana ny fitakiana vatsi-pianarana sy ny fomba fizarana ny trano tamin’io.
Toy ny isan-taona dia manamarika io andro io hatrany ireo mpianatry ny Oniversite Mahajanga rehefa 10 Janoary. Nanatitra fehezam-boninkazo sy nanadio ny toerana misy ny tsangambato eo amin’ny toerana nahavoatifitra io mpianatra io eny Ambondrona ho fahatsiarovana an’i Tiamananjara Emilien Félix.
mardi, 10 janvier 2017 11:14
Betafo : Mampihorohoro ny dahalo
Mandry tsy lavo loha ny mponina ao amin'ny fokontany Marolaona, kominin'i Soavina , distrikan'i Betafo satria dia tsy tahotra tsy henatra intsony fa dia efa mahasahy mandefa taratasy fampahafantarana ny fanafihany mihintsy ireo dahalo any an-toerana.
Nanambara mantsy ireto dahalo any Maroloana ireto fa ho tonga hanafika ny tanàna anio talata faha 10 ny volana janoary 2017 ary rehefa manao fanambarana toy izany moa izy ireo dia tonga tokoa.
mardi, 10 janvier 2017 11:08
Zava-kanto : Nodimandry i Bruno Raisner
Nodimandry omaly alatsinainy faha 9 ny volana janoary 2017 teto Antananarivo ilay mpanakanto malaza Bruno Raisner, izay avy atsy amin'ny nosy Ste Marie.
Niatrika fandidiana tamin'ny hopitaly teto an-drenivohitra ny tenany izao nindaosin'ny fahafatesana izao.
mardi, 10 janvier 2017 10:34
Raharaha Jirama Andapa : Nidina aty an-toerana ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena
Tonga aty Andapa androany ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena Rakotomamonjy Jean Max taorian’ny nahamay ny biraon’ny Jirama taty an-toerana omaly. Hijery ifotony sy hitady vahaolana momba izany no anisan’ny anton-diany.
Miara-dia aminy koa ny tompon’andraikitra roa avy amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena dia ny talen’ny fotodrafitrasa, Ramanantsoa Michel, sy ny talen’ny Spaoro federaly, Rakotozafy Rosa, hijery ny fomba hanantaterahana ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa fanaovana fanatanjahantena mba haharitra sy manarapenitra.